Lauren RAJAOBELINA · Avrily 2013 · Global Voices teny Malagasy
Lauren RAJAOBELINA · Avrily, 2013
Lahatsoratra farany an'i Lauren RAJAOBELINA tamin'ny Avrily, 2013
Media sy Fanoratan-gazety 26 Avrily 2013
Misy zavatra tsara ataon'ny radiom-bahoaka any Ginea-Bisao ankoatra ny fandefasana hirahira amin'ny onjam-peo, araka ny nolazain'ny fanadihadiana " Ny Feon'ny vahoaka". Radio izay namonjy ain'olona nandritra ny fihanaky ny valan'aretina kolerà, niady tamin'ny fitrandrahana ala tsy ara-dalàna, ary nanohitra ny fanavakavahana ara-taovam-pananahana, tamin'ny fampiraisana ireo vondrom-piaraha-monina misy ao an-toerana manodidina ny harenan'ny mozikan'i Ginea-Bisao.
Afrika Mainty 07 Avrily 2013
Mediam-bahoaka 03 Avrily 2013
Te hankasitraka ireo mpandray anjara an-jatony avy amin'ireo firenena maherin'ny 100 izay nanome soso-kevitra ho dinihina amin'ny Famatsiam-bola Kiritika 2013 ho fanentanana ny mponina amin'ny alàlan'ny haino aman-jery ny Rising Voices. Mahafaly anay ny manolotra ireto lisitra 74 tafakatra amin'ny dingana famaranana ary asaina mba handefa ny tetikasa farany ho dinihina. Ambara amin'ny tapaky ny volana Aprily ny mpandresy.